China EEC L7e Electric Pickup Cargo Mota vagadziri uye vanotengesa | Yunlong
EEC L7e Magetsi Kutora Cargo Mota
Positioning: Zviri nyore kufamba-famba uine hombe mutoro vhoriyamu, inokodzera mhando dzakasiyana dzekushambadzira kushandiswa uye logistics, kutakura mitoro, kubva kune bhizinesi logistics kusvika yekupedzisira mamaira dhiraivhu mhinduro.
Chitupa: EEC L7e
Mutoro: 1 zvikamu zve1 * 20 GP, zvikamu zvishanu zve 1 * 40 GP, zvikamu zvishanu zve 1 * 40 HQ.
Inowanikwa Colors: Dzvuku, Yero, Bhuruu, Girinhi, Chena, Dema, yakagadzirirwa.
Mberi Windshield: 3C yakasimbiswa yakadzikama uye yakaomeswa girazi Vandudza chinoonekwa uye zvakanyanya kuchengetedzeka.
Motokari: AC mota ine auto-inobata basa, ine simba uye humbowo hwemvura, ruzha rwepasi, hapana kabhoni brashi, isina-kugadziriswa.
Akatungamirira Light System: Diki uye isina kusimba dhizaini dhizaini yemwenje ye LED, mwenje mukuru wekutepfenyurisa uye pasi simba rekushandisa.
Platemetal Kavha uye pendi: Yakanaka kwazvo yakazara yepanyama uye yemagetsi chivakwa, kuchembera kuramba, yakasimba simba, nyore kugadzirisa.
Zvivakwa zvakagadzirwa kubva auto level metalplate zvakagadzirwa uye kumberi bhamba rakagadzirwa nesimbi chubhu yekusimudzira kuchengetedzeka. Yedu yepuratifomu yakadzika nzvimbo yegiravhiti inobatsira kudzivirira rollover uye inokuchengetedza uine chivimbo kutyaira .Automobile-giredhi, Robhoti-kupenda.
72v / 4000w A / C mota, Iyo powertrain inouya neyakagadziriswa-isina, yakavharwa lead acid mabhatiri. AC mota yakasungirirwa kumashure ekumashure inopa simba rekukurumidza apo ichiwedzera pakunyatsoshanda uye chengetedza simba. Rated vachizvitakudza 500 Madzimabo, uye Max Towing 2tons (kumeso mugwagwa pamusoro)
Yakavakwa pane yedu modular manera furemu chassis, simbi yakadhindwa uye yakasungwa pamwechete kuti ive yakanyanya kuchengetedzeka. Chassis yese inozonyikwa mubhati rinorwisa ngura usati waenda kunopenda uye musangano wekupedzisira. Dhizaini yayo yakavharirwa yakasimba uye yakachengeteka kupfuura vamwe mukirasi yayo nepo ichidzivirirawo vafambi kubva kukuvara, mhepo, kupisa kana kunaya.
Kuchengetedza-Yemahara Yekutungamira Acid bhatiri, nyore kutsiva, mazana matatu kusvika mazana mazana mashanu nguva yekuchaja macircuit (1-2 makore) pasi pekushandira nharaunda kubva -20 kusvika 50 ° C. Lithium udgrade ichave ichiwanikwa munguva pfupi iri kutevera
5000w mota, Air conditioner, kumberi bhamba, Pamberi bhamba nepamberi hombe / diki mwenje, tow hook, Aluminium chiwanikwa rim
Yakasanganiswa LCD inoratidzira mita dhizaini, yakazara ruzivo kuratidza, kupfupisa uye kujekesa, kupenya kuchinjika, nyore kunzwisisana nenguva simba, mileage, nezvimwe.7 inches In-board display, reverse kamera, pamwe neBluetooth, MP5, USB yekubatanidza nezvimwe
Mota neMagetsi Sisitimu warandi 1 gore, Tungamira acid acid Bhatiri igore rimwe. Kune zvimwe zvikamu, ndapota tarisa kubhuku rebasa.
EEC L7e Homologation Yakajairika technical Specs
Sarudza-up Kukura (mm)
Kuisa Kugona （Kg）
100Ah Tungamira Acid Bhatiri
Kumberi 145-R12 Kumashure 145-R12
LCD inoratidzira + Reverse kamera
Door kiya & hwindo
Pashure: EEC L1e Bhasikoro Magetsi
Zvadaro: EEC L6e Magetsi Kabhini Mota-Y4
Magetsi Cargo Mota
Magetsi Mota Yekutakura